Tumira chinyorwa pane yeAfrikhepri tsika chikuva - Afrikhepri Fondation
Afrikhepri ndechimwe chezvinhu zvinoshandiswa paruzhinji zvekugovana ruzivo. Izvo hazvishande kuti ubatsirwe kadiki denderedzwa revanhu asi nekuda kweruzhinji kufarira. Inovavarira kusimudzira tsika pasi rese kuburikidza newebhusaiti yavo kuti vaenzanise mutsauko uripo pakati pevanhu uye nekuunza pamwe chete kuziva kune paradigm itsva.
Dzvanya pazasi pane chiratidzo chesarudzo yako kuti ubatanidze uye utumire chinyorwa kana vhidhiyo pachikuva chetsika iyi
Dzvanya pazasi kutumira chinyorwa pane saiti
Chokwadi chinofanira kuburitswa kumunhu wese nekuti "hatibatidze mwenje kuti tiise pasi pebhasi, asi isu tinoisa pachigadziko chemwenje, uye iwo unovhenekera vese vari mumba". Saka basa redu ndere kugovana Ruzivo nevanakomana vese vaKama kuti iwo mwenje uvhenekese vese vagari vepamba pehupenyu (Per Ânkh).
chikamu KUVA NOKUSHA ugari AFRICAN CUISINE MHURI WEVADZIDZI VEMBA Documentary VANA ENVIRONMENT URANDA ZVIMWE ZVAKAITIKA BUSINESS FACTS VAFARIDZI VAFRICA MAMVIDHIYO ACHARAMBA NHOROONDO YAKANAKA NOKUTANGA AFRICAN INITIATIONS Registration / LOGIN BLACK INVENTORS AND SAVENTS PARADIGM KAMIT
Kelvin Doe, achiri kuyaruka anobva kuSierra Leone, anogadzira jenereta yemagetsi
Body Academy Paris, chikoro chekutanga chekudzivirira bvudzi chakanyanya muAfro neEurope bvudzi
Art kurapa uye African kutanga